ကြည့်ပါ၊ ပိန်လှီသောစတိုးဆိုင်သည်မည်မျှအရေးပါသည်ကိုအရေးမကြီးပါ - သတင်း
ကြည့်ရှုပါကတကယ်တော့ 'ဂျပိန်' စတိုးဆိုင် mannequins ဘယ်လောက်အရေးမထားဘူး
ယနေ့ကမ္ဘာသည်ကိုယ်စားပြုမှုကိုစွဲလမ်းနေပြီးသေချာအောင်လုပ်သည် လူတိုင်း မီဒီယာနှင့်ဖက်ရှင်စသည်တို့တွင်စနစ်တကျကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်။ ပိုကြီးသော catwalk မော်ဒယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌အရောင်ရှိသူများ၊ တီဗီရှိုးမှအရောင်ရှိသူများအတွက်ပိုမိုကိုယ်စားပြုမှုရှိရန်လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဆက်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ဒါပေမယ့်ငါစဉ်းစားခြင်းနှင့်သွားပြီဘယ်တော့မှတ ဦး တည်းနေရာ, ဒီအလုံအလောက်ထုကိုကိုယ်စားပြုကြသည်မဟုတ်လော Storefront mannequins ။ ကောင်းပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲသိလား အကြောင်း, အတော်လေးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ရယ်စရာပါပဲ။
@westfieldtuggerah မှာငါ့အကြိုက်ဆုံး # AW17 ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု။ ??? ဒီလှပတဲ့ရွှေဘောင်တွေကိုချစ်တယ်။ ⭐️
မေလ (၂) ရက်၊ ည ၁၁း၂၆ တွင် PDT မှ S T Y L I G G & V M (@chasemystyle) မှမျှဝေသော post ကို။
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းတစ်ခုအရစတိုးဆိုင်မန်းကိန်းများသည်အလေးချိန်အလွန်နည်းသည်ဟုကြေညာခဲ့သည် ။ ဟုတ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲသိလား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ fuck ဆိုတဲ့မဘာမှမစား။ ၎င်းတို့သည်စာသားများကသူတို့ကမ်းလှမ်းထားသောအကောင်းဆုံးအဝတ်အစားများဟုသင်ထင်သောအရာကိုပြရန်အသုံးပြုသောပလပ်စတစ်ရုပ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုရန်သွားအဲဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး, ဤသည်ကိုသင်ကြည့်ဖို့ထင်နေပုံပါပဲ, ငါတို့အကောင်းဆုံးရဲ့အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ငါသည်သင်တို့အကြောင်းမသိကြပေမယ့်ငါမမျက်နှာနှင့်အလွန်အကျွံရှည်လျားသောလက်မောင်းနှင့်ခြေထောက်မရှိဘဲတောက်ပ, အဖြူ, ပလတ်စတစ်အရုပ်ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှနှင့် yeah ထင်သောကြောင့်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား, အဘယျသို့ငါသိလိုဤအရာငါသိလို။ ထိုအခါငါသင်အမှန်တကယ်စဉ်းစားလျှင်သင်တစ်ခုခုကိုတူမကြည့်ချင်ကြဘူးသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
သက်ရှိသတ္တဝါများမဟုတ်သည့် mannequins များနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ pic.twitter.com/CItPFQFsBy
- Saltasaurus (@LiteralSalt) မေလ 7, 2017
တစ် ဦး mannequin ၏အရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်။ စိတ်ဆိုးဖြစ်ခြင်းအထောက်အကူဖြစ်စေမပါကလျှော့ချ။ ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့အရာလုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရည်ရွယ်သည်။ စတိုးဆိုင်တစ်ဝိုက်လုံးပလတ်စတစ်စတိုးဆိုင်အတွင်းရှိရယ်စရာကောင်းသောပါးလွှာသောမော်ဒယ်များကောအသို့နည်း။ ဒါမှမဟုတ်မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ လမ်းဘေးစင်္ကြံ၊ တီဗွီမှာလား။ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောဤအရာများအပေါ်အာရုံစိုက်ပြီးလူနည်းစုခြောက်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲလူထုတစ်ခုလုံးအတွက်ပိုမိုကိုယ်စားပြုရန်ဖြစ်သည်။
ငါ mannequins အပေါ်အဝတ်ကိုမြင်သောအခါသူတို့သည်ငါ၏ကိုယ်ပုံသဏ္orာန်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားမဟုတ်ပါဘူးသောအခါငါစိတ်ပျက်အားငယ်မခံစားရဘူး။ ငါရိုးသားဖို့, သူတို့ဝတ်ဆင်သောအဝတ်ကိုကြိုက်မဟုတ်လျှင်ငါအနိုင်နိုင်ပင် mannequins အဲဒီမှာပင်မှတ်ပုံတင်။ ငါအဝတ်ကိုကြိုက်ကြဘူး, သူတို့ကိုရှာ, ပြီးတော့သူတို့ကိုကြိုးစားပါရင်တောင်ငါကမိုက်မဲသောကြောင့်, ထို mannequin ကြည့်ပုံကိုမကြည့်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံမမှန်၌ကြည့်ရှုကြဘူး။ အဝတ်ငါ့ကိုမကိုက်ညီလျှင်သူတို့သည်ငါ့ကိုမကိုက်ပါဘူး။
ငါသူတို့ကိုချွတ်ပြီးပြန်ထားလိုက်တယ်၊ ဒီနေ့ခေတ်ဖက်ရှင်တွေအတွက်ကျွန်တော့်ရဲ့ဘောင်းဘီတွေဟာသိပ်ကြီးလွန်းတယ်၊ ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားမယ်။ ငါမင်နင်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုမစတင်ပါဘူး။ ဒါကစတိုးဆိုင်ရဲ့အမှားပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာမိန်းမတွေမကြည့်သင့်တဲ့ဗားရှင်းကိုမဖော်ပြနိုင်တဲ့မနီယင်သေးသေးလေးတွေရှိတယ်၊ ။ ငါသူတို့အလေးအနက်ထား, ဆိုလိုတာကသူတို့တစ်ဝက်အချိန်ခေါင်းကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
ငါသည်အခြားရက်သတ္တပတ်စင်တာစီးတီး၌အလုပ်လုပ်သောအခါငါပထမ ဦး ဆုံး, ပိုကြီးတဲ့စကေး, စားဆင်ယင်ပုံပိုင်လုပ်ရတယ်။ ဒါဟာလုံးဝစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအရောင်ပုံပြင်ထွက်လာသောဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်! ဟေး! ???????? #VisualMerchandising #Visual #VisualVibes #VisualLife #VisualArt #WensensFashion #fashion #dresses #Mannequins #Beginner #CalvinKlein #TommyHilfiger #RalphLauren #LoveMyJob #Macys #Philly #CenterCity
Visual Artist မှမျှဝေသည် Creative ??? 6:54 pm တွင် PDT မှာမေလ 6, 2017 ရက်တွင် (@visualeyesofblue)
အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်၊ စျေး ၀ ယ်စင်သို့သွားပြီးထိုအဝတ်အစားများ၌ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုကြည့်သင့်သည်ဟုထင်လျှင်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခန္ဓာအနေအထားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မန်းကိန်းသည်သင်မည်သည့်အဝတ်အစားကိုကြည့်မည်၊ မည်မျှကြည့်သည်ကိုမဆုံးဖြတ်ပါ သင့်တယ် ကြည့်ပါ ဦး ။